Taageereyaasha Arsenal Oo Farriimo Hanjabaad Ah U Diray Zaha Oo Rikoodhe La Siiyey Ciyaartii Crystal Palace | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Taageereyaasha Arsenal Oo Farriimo Hanjabaad Ah U Diray Zaha Oo Rikoodhe La Siiyey Ciyaartii Crystal Palace
(31-10-2018) Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa Axaddii lumisay aba dhbcood markii ay iska hor yimaaddeen Crystal Palace, waxaanay natiijadii kulankaasi ka reebtay Chelsea oo kaalinta saddexaad ay kula tartamaysay.
Weeraryahanka Wilfried Zaha ayaa cay iyo hanajbaad dil loo diray kaddib markii loo dhigay rikoodhe uu khaladka iska lahaa Granit Xhaka, waxaana markii ay ciyaartu dhamaatay farriimo loo diray qoyskiisa iyo isagaba, kuwaas oo loogu sheegay in nafta laga jari doono.
Saha ayaa waxa uu sheegay in la cunsuriyeyeeyey, kaddibna loogu hanjabay in la dili doono, taas oo xattaa gaadhay qoyskiisa.
“Dadku waxay soo qaadayaan tallaabo dheeraad ah, waxayna noqonayaan cunsuriyiin, waxayna ii rajaynayaan dhimasho. Wanaag ayaan u rajaynayaa qoysaskayga. Noloshaydu way wanaagsan tahay ka sokow nacaybkiina.” Sidaas ayuu yidhi Zaha.
Warku ma sheegin in Zaha uu ciidamada booliska la wadaagay falka lagula kacay oo ah mid ceeb ku ah ciyaaraha, isla markaana aan laga filaynin inay sameeyaan taageereyaasha Arsenal oo ciyaartooyo badan oo madow ahh ku jiraan.
Cayaartaas kaddib, ninka khaladka ku galay Zaha ee Xhaka ayaa sheegay in rikoodhahaasi ahaa caddaan oo aanu wax mugdi ah ku jirin.
Xhaka ayaa lugta bidix u dhigay Zaha oo diilinta goolka hortiisa kubadda ku haysta, waxaana lagu abaalmariyey rikoodhe uu shabaqa dhex dhigay Luka Milivojevic, goolkaas oo ahaa mid barbarreeyey ciyaarta oo maraysay 2-1 ay Gunners hoggaanka hayeen.
Laga soo bilaabo xii ciyaareedkii 2014-15 kaliya hal ciyaartoy oo ah Jamie Vardy ayaa ka badan rikoodheyaasha lagu galo Zaha. Vardy waxa loo dhigay 15 rikoodhe, halka Zaha iyo Raheem Sterling min 11 mar rikoodheyaal lagu abaalmariyey.